ဗေဒင် နှင့် ယတြာ Archives - Lodarya
အခု ဧပြီလ (၅) ရက်​နေ့မှာ ​ခေါင်​​ဆေးမင်္ဂလာပြုဖြစ်အောင် ပြုလုပ်ကြပါ
April 4, 2019 Lodar Ya 0
၄လပိုင်း၅ရက်​နေ့မှာ ​ခေါင်​​ဆေးမင်္ဂလာပြုဖြစ်အောင် ပြုလိုက်ပါ နော်… လဆန်း၁ရက်​​နေ့မှာ​ခေါင်​​ဆေးမင်္ဂလာပြုပါ ယခု​ဖော်​ပြပါ ၄လပိုင်း၅ရက်​နေ့ဟာမြန်​မာအ​ခေါ်အ​ဝေါ်အရ တန်​ခူးလဆန်း၁ရက်​​နေ့ဖြစ်​ပါတယ်​ ​ရှေး​ရှေး​သောပညာရှိကြီး​တွေ က ဒီလို ဆန်းရက်​၁ရက်​​နေ့ကြုံရင်​ဦး​ခေါင်​​ဆေးမင်္ဂလာပြု တတ်​ကြပါတယ်​ ဒါ​ကြောင့်​ဒီလိုရက်​ကိုမဖြစ်​မ​နေဦး​ခေါင်​​ဆေးမယ်​ဆိုရင်​​တော့ တ​ရော်​ကင်းပွန်းရာ်​ မြန်​မာနည်းမြန်​မာဟန်​နဲ့ဦး​ခေါင်း​ဆေးရမှာဖြစ်​ပါတယ်​ ဦး​ခေါင်း​ဆေး​တော့မယ်​ဆိုရင်​ တ​ရော်​ကင်းပွန်းရည်​ထဲကိုသ​ပြေ ၉ညွန့်​ထည့်​ရမှာဖြစ်​ပါတယ်​ တနင်္ဂ​နွေသားသမီး​တွေက​မြောက်​အရပ်​ မျက်​နှာမူပါ တနင်္လာသားသမီး​တွေက​တောင်​အရပ်​ကိုမျက်​နှာမူပါ အင်္ဂါသားသမီးများကအ​နောက်​အရပ်​မျက်​နှာမူပါ ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီး​တွေကအ​ရှေ့အရပ်​ကိုမျက်​နှာမူပါ ကြာသာပ​တေးသားသမီးများကအ​နောက်​​တောင်​အရပ်​ကိုမျက်​နှာမူပါ […]
တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း- 4.4.2019 မှ 10.4.2019 အထိ
တစ်ပတ်စာ ၇ရက်သားသမီး ဟောစာတမ်း- 4.4.2019 မှ 10.4.2019 အထိ တနင်္ဂနွေ ဒီကာလအတွင်း မိမိဖြစ်ချင်တာတွေကိုဖြစ်အောင်လုပ်သွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်နဲ့ပက်သက်ပြီးမိမိ အတွက် လိုအပ်တဲ့အကူအညီတွေကိုလဲ မိမိရဲ့ဆရာသမားမိဘတွေဆီကရရှိပါလိမ့်မယ်။ ဖခင်က မိမိဖြစ်ချင်တာ တွေကိုလိုက်လျောပါလိမ့်မယ်။ အလုပ်ထဲမှာလစာနည်းနေတာဖြစ်စေ၊ အခွင့်အရေးမရတာမျိုးဖြစ်စေ၊ လုပ်ရတာ နဲ့မတန်ဘူးထင်နေတယ်ဆိုရင် အထက်လူကြီးဆီတင်ပြပြောဆိုလို့အလွန်ပဲကောင်းပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနှင့်ပက် သက်ပြီးတော့လဲ အဆိုးအညံ့မရှိသလောက်ရှားပါးနေတတ်ပါတယ်။ […]
ကိုယ်ကပဲဂရုစိုက်နေရပြီး ကိုယ့်ကိုဂရုမစိုက်တဲ့ချစ်သူကို ပြန်ချေဖို့ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်း(၅)ခု…!
ချစ်သူတွေဖြစ်ခဲ့ကြတာကတော့ နှစ်ဦးသဘောတူပါပဲ၊ ဒါပေမယ့် ချစ်သူ သက်တမ်းလည်းကြာလာရော ကိုယ်ကပဲတစ်ဖက်သတ်အရမ်းတွေချစ်ပြီး၊ အရမ်းတွေဂရုစိုက်နေရပြီး သူ့ဘက်က အဖက်မလုပ်တော့သလိုလို၊ ဂရုမစိုက်ချင်သလိုလို၊ ကိုယ်နဲ့တွဲနေရတာ စိတ်မ၀င်စားသလိုလိုတွေလုပ်ပြနေပြီး၊ အဆင်မပြေ၊ မနွေးထွေးတော့တဲ့အခြေအနေမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင် အဲ့ဒီအချစ်ရေးက ဘယ်လိုမှ ပျော်စရာကောင်းမှာမဟုတ်ပါဘူး။ အဲ့ဒီလိုအခြေအနေဖြစ်နေလို့ ကိုယ့်ဘက်က အဆင်ပြေအောင်အမျိုးမျိုးကြိုးစားပြီး အလျှော့ပေးပေမယ့် အဆင်မပြေလာဘူးဆိုရင်တော့ ဆက်ပြီးအောက်ကျို့မနေဘဲ ဒီလိုနည်းလမ်းတွေသုံးပြီး ပြန်ချေလိုက်ပါ။ […]
တစ်လအတွင်း ကံကောင်းလာစေရန် ပြုလုပ်ရမည့် နည်းလမ်း (၅) မျိုး
တစ်လအတွင်း ကံကောင်းလာစေရန် ပြုလုပ်ရမည့် နည်းလမ်း (၅) မျိုး ၁။ မိမိဝင်ငွေ မည်မျှပင် နည်းပါးပါစေ ၁၀ ပုံ ၂ ပုံကို လှူပါ။ ရရှိလာသော ဝင်ငွေမှ ဖယ်ထား၍ မြတ်စွာဘုရားကို ဖယောင်းတိုင် တစ်ထုတ်ဖြစ်စေ. ပန်းတစ်စည်း ဖြစ်စေ လှူပါ။ မိဘများသက်ရှိထင်ရှားရှိလျင် […]
ခုနှစ် ရက်သားသမီးများ စီးပွားရေး လာဘ်ပိတ်ပြီး အဆင်မပြေသူများအတွက် ယတြာကောင်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
ခုနှစ် ရက်သားသမီးများ စီးပွားရေး လာဘ်ပိတ်ပြီး အဆင်မပြေသူများအတွက် ယတြာကောင်းလေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ မိတ်ဆွေ များအားလုံး- မင်္ဂလာပါ ခုနှစ်ရက် သားသမီးများ စီးပွားရေး လဒ်ပိတ်ပြီး အဆင်မပြေ သူများအတွက် ဆရာကိုယ်တိုင် တွက်ချက်ပြီး မတ္တာဖြင့် ယတြာလေး တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အုန်းမျက်နှာပွင့်ယတြာလေးပါ ယုံကြည်မူ ဖြင့်ပြုလုပ်ပါ မုချအောင်မြင်လိမ့်မည်။မိမိမွေးနေ့မှာ ပြုလုပ်ရမှာ […]
ကြာသပ​တေး သားသမီးများ အတွက်​ တစ်​သက်​စာ ​ဟောစာတမ်း…!
March 23, 2019 Lodar Ya 0
ကြာသပ​တေး သားသမီး များသည်​ စိတ်​ရင်း ​စေတနာ ​ကောင်းမွန်​ပြီး ပွင့်​လင်းဖြုစင်​​သော စိတ်​ရှိသည်​။ လူတိုင်းကို ခင်​မင်​ တတ်​မည်​။ အကူအညီ ​တောင်းခံရင်​လည်း မည်​သူကိုမဆို ကူညီ​ပေးရန်​ အသင့်​ရှိ​နေတတ်​ကျသည်​။ အများနှင့်​ စည်းစည်းလုံးလုံး ညီညီညွှတ်​ညွှတ်​ ​နေချင်​စိတ်​ရှိသူ ဖြစ်​မည်​။ မိသားစု ​ဆွေမျိုး သားချင်းများ အ​ပေါ် […]
လာဘ်ပွင့်စေဖို့အတွက် နေ့သားအလိုက် အပင်စိုက်နည်း…!
လာဘ်ပွင် သစ်ပင်နော် တနင်္ဂနွေသားက အုန်းပင် ပေါက်ကို အရှေ့ရပ်မှာ စိုက်ပါ ။ နည်းစနစ်ကတော့ အောက်မှာပါတယ် ။ အားလုံးထူးခြားမယ် လာဘ်ပွင့် လာလိမ့်မယ် ။ တနင်္ဂနွေ သားသမီး – အရှေ့အရပ် အုန်းပင်ပေါက် တနင်္လာ သားသမီး – အရှေ့တောင်အရပ် ခရေပင် […]
သစ်‌မင်း ပုံပါ ။ သစ်‌ဆိုး ၀ါးဆိုး‌တွေကို နိုင်‌နင်းတယ်‌လို့ ဆိုပါတယ်‌ ။ အိမ်‌‌တွေမှာ သစ်‌ဆိုတာ မပါ မဖြစ်‌ပါ ။ သစ်‌၀ါး‌တွေ ဆိုတာကလည်း ‌တောမှာ‌ ပေါက်‌ကြတယ်‌ ။ အချို့သစ်‌၀ါး‌တွေက အန္တရာယ်‌ ဖြစ်‌‌စေတတ်‌တဲ့ ကမ္မစိဒ္ဓိရှင်‌‌တွေရဲ့ အရိပ်‌အ‌ငွေ့‌တွေ ပါလာတတ်‌ကြပါတယ်‌ ။ […]
မတ်လ ၂၁ မှ ဧပြီ ၂၀ အတွင်းမွေးဖွားသော မိဿရာသီဖွားများ ငွေတွေ၊ ပစ္စည်းတွေ မကုန်သင့်ဘဲကုန်၊ မထွက်သင့်ဘဲထွက်တတ်သောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ထီထိုးဖို့ နိမိတ်ကောက်ချင်ရင် ဂေါ်ဖီထုပ်ပေါ်မှာ ကောက်ယူပါ။ ၃ ဂဏန်း၊ ၁ ဂဏန်းများ အကျိုးပေးသောနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ ကံကောင်းရန် ကြီးကဲသူများကို မုန့်ဟင်းခါး […]